Wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland "weli ma furmin" - BBC News Somali
Wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland "weli ma furmin"
2 Maarso 2015
Image caption Labada dhinac ayaa markii shanaad ku kulmaya Turkiga
Wafdiga Somaliland ee ka qeybgalayay shirka Istanbul ayaa diiday inay horfariistaan wafdiga dowladda Federaalka ee Soomaaliya, sida ay sheegayaan warar aan ka heleyno goobta la filayay inuu kullanka ka dhaco.
Somaliland ayaa sababta ku sheegtay inaysan horfahdiisaneyn xubno ka socdo dowladda feredaalka oo deegaan ahaan ka soo jeeda Somaliland.
Afar xubin oo ka tirsan wafdiga dowladda federaalka oo kala ah wasiirka warfaafinta ee dowladda Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, Cali Axmed Jamac Jangeli Wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada, Saciid Qoorsheel iyo Mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Xildhibaan Cilmi, ayey wafdiga Somaliland dalbadeen in laga saaro kullanka, sida ay BBC-da u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay.
Shirka ayaa la filayay inuu Istanbul ka furmo shalay oo sabti ahayd, laakiin waxaa la sheegayaa inay maanta oo Axad ah xittaa ay adag tahay inuu furmo.
Inkastoo aan la ogeyn dhinaca tanaasulidoona, laakiin wararka waxa ay sheegayaan in maanta ay kala cadaan doonaan mowqifyada labada dhinac, iyadoo shalay oo dhan ay dhinackastaa shirar gooni-gooni ah ay wada yeelanayeen.
Wafdiga Somaliland ayaa BBC-da shalay waxa ay u sheegeen inaysan shirka ka qeybgalidoonin haddii dowladda federaalka aysan ka saarin xubnaha ay diidan yihiin inay horfadhiistaan.
Wafdiga dowladda Soomaaliya oo aan la xiriirnay waxa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrinta, laakiin warsaxaafadeed dowoladda ay soo saartay ayaa lagu sheegay in dowladda ay ka go’an tahay inay Somaliland markan kala hadasho arrimaha siyaasadda ee masiiriga ah.